ပင်မစာမျက်နှာ » နောက်ဆုံးရဆောင်းပါးများ » နိုင်ငံတကာသတင်းများ » ယူဂန်ဒါ Breaking News » Ziwa Rhino Sanctuary သည်ယူဂန်ဒါတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်အာဏာပိုင်အဖွဲ့၏ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုကူညီသည် » စာမျက်နှာ 2
Located 170 km northwest of the capital of Kampala, the Ziwa Rhino သန့်ရှင်းရာဌာန was established in 2005 inabid to introduce the southern white rhinos to Uganda, and it was mutually agreed between UWA and RFU the latter manages the breeding program in Uganda.
2 ၏စာမျက်နှာ2prev နောက်တစ်ခု
Air Canada သည်ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းမူဝါဒအသစ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ
လူ ၅၉ ဦး သေဆုံးပြီး ၁၀၀၀ ကျော်ပျောက်ဆုံးနေသည်။
ဒေါ်လာ ၉၀ ဘီလျံဈေးသက်သာသည့် subs များ: မြေအောက်ရထားသည်ပြင်သစ်ကိုလှောင်ပြောင်သည်
IMEX Buzz Day သည်လမ်းကြောင်းသစ်စောင့်ကြည့်သူများကိုဖန်တီးရန်ကူညီသည်
စိတ်ကျရောဂါနှင့်အမေရိကန်ဟိုတယ်စျေးကွက် ၂၅ ခုအနက် ၂၁ ခု
ဤ Asian Black Bear သည် Omelet၊ Facebook နှင့် ...
IATA သည်ဥရောပဒစ်ဂျစ်တယ် COVID အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုထောက်ခံသည်။
Finnair သည်မိုင်ယာမီ၊ ဘန်ကောက်နှင့်ဖူးခက်တို့ကိုမရပ်မနားလွှင့်တင်ခဲ့သည်။
ယူနိုက်တက်လေကြောင်းလိုင်းများ - အဲလေယာဉ်ပျံသန်းမည်
ဘာဘေးဒိုးစခရီးသွားလုပ်ငန်းသည်ဇူလိုင်လအတွင်း ၀ င်ရောက်မှုစံချိန်တင်ပြန်လည်မြင့်တက်လာသည်
Toronto မှ Las Vegas, Orlando, Tampa နှင့် Cancun သို့လေကြောင်းဖြင့် ...
၅၄၈ ရက်ကြာပြီးနောက်ဒိန်းမတ်နိုင်ငံသည် COVID-19 ကန့်သတ်ချက်အားလုံးကိုအဆုံးသတ်သည်။
နွေရာသီနှင့် ပတ်သက်၍ ကာရေဘီယံခရီးသွားလုပ်ငန်းသည်အကောင်းမြင်
Nur-Sultan မှ London Heathrow သို့တိုက်ရိုက်လေယာဉ်ခရီးစဉ် ...
ရှင်သန်နှင့်ရှင်သန်! UNWTO သည်ဒီဇိုင်းပြန်လုပ်ရမည့်အချိန်ဖြစ်သည်။
Hyatt သည်၎င်း၏အားလပ်ရက်အစုစုကို ၀ ယ်ယူခြင်းဖြင့်အားဖြည့်ပေးသည်။
ကာတာလေကြောင်းလိုင်းသည်ကနေဒါလေကြောင်းလိုင်း၏ ၁၀ နှစ်ခရီးစဉ်ဖြစ်သည်
ဆန္ဒပြသူတွေဟာဘေရွတ်ဘဏ်ကို ၀ င်တိုက်
အိန္ဒိယတွင်ဖျောက်ထားသည့်ခရီးသွားကျောက်မျက် - Quaint Jaisalmer
ရုရှား Sputnik V COVID-19 ကာကွယ်ဆေးအတည်ပြု ...
Doha၊ Abu Dhabi, Dubai: လေကြောင်းလိုင်းများမှခရီးစဉ်ဖြင့်ပြောင်းရွှေ့မည်။
Crossing သည်ယာယီအားဖြင့်တက်ကြွသော ဦး တည်ရာကိုစတင်သည်။
UNWTO အထွေထွေညီလာခံမော်ရိုကို - လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုမရှိသေးပါ။
COVID သည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်ပြင်သစ်ခရီးသွားနှင့်ခရီးသွားလာရေးကိုမည်သို့ထိခိုက်ခဲ့သနည်း
ဆစ်ဒနီတွင်နေထိုင်သူများသည်၎င်းတို့ဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြရန် ID ရှိရမည်
ကာကွယ်ဆေးရရှိရေးခရီးသွားလုပ်ငန်းတွင်ပါ ၀ င်ရန်လိုအပ်သည်။
ထိုင်ဝမ်ခရီးသွား for ည့်များအတွက်ဂူအမ်တွင်အားလပ်ရက်နှင့်ကာကွယ်ဆေးထိုး
Universal Beijing Resort ကိုယနေ့အများပြည်သူအားဖွင့်လှစ်လိုက်သည်
ဒေါ်လာသန်း ၇၀ ချေးငွေမှဂျမေကာခရီးသွားလုပ်ငန်း ...
Atkins Kroll သည်Håfa Adai ကတိသစ္စာပြုအစီအစဉ်တွင်ပါ ၀ င်သည်
Bahamas Tourism Charting သင်တန်းအသစ်